Toeram-panofanana momba ny varotra
Na ny Pro aza dia miverina amin'ny toby fiofanana
Alakamisy, Jona 24, 2010 Alakamisy Oktobra Oktobra 4, 2012 Matt Nettleton
Fa maninona ny zana mankany amin'ny Camp Training? Tsy efa hainy ve ny milalao Football?
Amin'ny 30 Jolay amin'ity taona ity dia handeha any amin'ny Camp Camp ny Colts, izany dia hanamarika ny fiandohan'ny fe-potoana fampiharana mandritra ny efa-bolana natao hanerena ny mpilalao hifantoka amin'izay tokony hataony hanatsarana ny fahaizany milalao baolina kitra. Saingy toa fandaniam-potoana fotsiny ho ahy izany, rehefa nandany ny ankamaroan'ny mpilalao ireo nandritra ny 8 taona farafahakeliny teo amin'ny fiainany tamin'ny asany tamin'ny lalao nifaninanana ary ny Colts dia nandresy betsaka noho ny ekipa matihanina rehetra nandritra an'ity fotoana ity. Inona no eritreretin'ireto olona ireto fa ho nianarany?
Tsy mahagaga raha amin'ny andro voalohany amin'ny tobiny dia mety handre ilay teny malaza Vince Lombardi izay saika ny mpanazatra rehetra no ampiasaina hanombohana toby fiofanana. “Tompokolahy, baolina kitra ity.” Ity fanombohana ity dia manondro an'ireo mpilalao rehetra eny an-kianja fa ny fahombiazan'ny baolina kitra, toy ny fahombiazan'ny varotra, dia mifantoka tanteraka amin'ny saina tokana amin'ny fanaovana ireo zavatra kely tsara ary ny fahazoana antoka fa ianao no manatanteraka ny Fototra.
Rehefa miara-miasa amin'ireo mpanjifanay izahay dia tsy misy zavatra mahafa-po kokoa noho ny mijery ny mason'izy ireo satria tsapan'izy ireo fa ny fiofanana amin'ny varotra dia tsy misy hafa amin'ny fiofanana ho an'ny fanatanjahan-tena. Tsapan'izy ireo fa ny rafitra izay natombok'izy ireo nianatra dia tsy inona fa ny andiana fitondran-tena, toetra ary teknika andiany tsotra – fa raha ampiharina tsara dia mampitombo ny fahafahan'izy ireo manidy orinasa bebe kokoa ary mahazo vola bebe kokoa.
Ary fantatr'izy ireo koa ny antony ny fiofanana dia dingana mitohy, miaraka amin'ny mpanjifa mahazatra antsika miasa mandritra ny 4-6 taona. Satria na tsotra toy inona aza ny Fitondra-tena, ny toe-tsaina ary ny teknika dia misy làlana lavitra tsy fantatra izay tokony hataonao ka hanao izay tokony hataonao ho azy.
Tsy mino aho fa tonga lafatra ny fampiharana, raha ny marina amin'ny baolina kitra sy ny varotra dia tsy misy lafatra. Na izany aza, amin'ny sehatra matihanina rehetra dia fantatsika fa ny fampiharana dia mandroso. Rehefa mijery ny herin'ny varotrao ianao, manao fanazaran-tena ve izy ireo? Ary amin'ny fampiharana no tiako holazaina, tena miasa tokoa ve izy ireo amin'ny fanatsarana rafitra ny fahaizany mivarotra amin'ny alàlan'ny fanamafisana mitohy miaraka amin'ny famerimberenana sy ny fandrefesana ny valiny? Sa mivoaka mahita olona betsaka araka izay azony atao izy ireo, manantena fa mety ny zavatra ataony?
Amin'ny manaraka ianao dia mijery an'i Peyton Manning manilika fantsom-pahefana efatra eny an-tokotany, matokia fa miato ianao ary mahatsapa fa isaky ny minitra i Peyton dia milalao an-tsaha mandritra ny lalao dia mandany 15 minitra eo amin'ny kianja fanaovana fanazaran-tena izy. Izay mamerina ahy amin'ny fanontaniako, rehefa mijery ny herin'ny varotrao ianao, mampihatra ve izy ireo?
Inona no azonao ianarana momba ny Twitter avy amin'ny Tweet
ATTN: Mpanamboatra ny haino aman-jery sosialy